ပါးပြင်မှာသနခါးလေးနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပါးပြင်မှာသနခါးလေးနဲ့
Posted by Novy on Mar 22, 2012 in Photography, Travel | 32 comments
ပါးပြင်မှာသနခါးလေးနဲ့ ..( ကျိုက်ထီးရိုးခရီးသွား )
ကျိုက်ထီးရိုးက သနခါးချစ်သူတွေရဲ့ ပုံကို
ညီညီဦး ထမင်းဆိုင်က သနခါးချစ်သူ3
မြန်မာစစ်စစ်မိန်းကလေးတွေက အသားညိုတာများတော့ သနပ်ခါးနဲ့ပိုလိုက်တယ်..။
သနပ်ခါးကို အရောင်ထည့်ပြီးလိမ်းတတ်ရင် ပိုတောင်လှဦးမယ်။
အဲဒီမှာသနပ်ခါးအစစ်လဲ ၀ယ်လို့ရမှာပေါ့ ….
404 ROOM says:
အဲဒီလိုမျိုး မြန်မာ့ ရိုးရာပွဲတော်တွေကို ကျင်းပတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်ခဲံရင် အရမ်း ကောင်းမှာပဲ။ ခုတော့ တခြားနိုင်ငံက ပွဲတော်တွေကို အတုခိုးပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပနေတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုးရာ ပွဲတော်တွေကို ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေပြီ။ ၀မ်းနည်းစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ပုံနံပါတ်၂ က..မျက်နှာပေးအနေအထား.. ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျ…
သူကြီးရယ် ခြင်းလေးဖျက်ပြီး ပေးချင်ရင် ပေးလိုက်ပါနော်
ဟုတ်တယ်…နံပါတ် (၂) ပုံ မိုက်တယ်။ ပုံ (၁)က တော့ လူတူပေမယ့် အိုက်တင်လုပ်ထားမှန်း သိသာဒယ်။
ကြိုသိရင် …juma သနပ်ခါး တန်းမှာ သနပ်ခါးဝယ်တဲ့ပုံ ပို့ပေးမှာပေါ့ဗျ …
တစ်ဆိုင်ပီးတစ်ဆိုင် သွေးလိမ်း လာတာ …ဟိဟိ လှမှလှပဲ …
တကယ်လို့သာပြိုင်ပွဲတွေ ရှိလာခဲ့ရင် ဂျူးဂျူးမ နိုင်မှာသေချာတယ်။ သူက အမြဲသနပ်ခါးလိမ်းနေတော့တာပဲ။ ကောင်လေးက ပြောထားပုံရတယ်…
မမနော် …ကောင်လေးပြောလို့ကတော့ လိမ်းသေးဘူးနော်…
သနပ်ခါးကြိုက်တာ ရွာသူ အစစ်ပေါ့ ဗျ …
မြန်မာ လုံမပျိုလေးတွေ သနပ်ခါး ချစ်သူ စစ်စစ်တွေပဲ..
လှတယ် ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှကြတယ်။
ဟီး မမနိုဗွီ ဒါမီးမီးအတွက်တင်ပေးတာလား ကျေးဇူးနော် …. သူကြီးကဆုပေးမယ်တဲ့ မီးမီးကိုလည်းပေးနော် နောက်နေ့မှ မီးမီးပုံလေးတင်လိုက်မယ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးတော့ …..
ဂျူးဂျူးမ နဲ့ ခိုင်ခိုင်ရေ.
မေဒေး အလှူခရီးထွက်မှ သနခါးလေးတွေ အပြိုင်လိမ်းခဲ့နော်
ပြီးရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ် အလှဆုံးဆု ပေးမယ်နော်
မနို မော်ဒယ်လေးတွေက ကင်မရာလေဒီနဲ့ အပြိုင်လှနေပါလား
မနို ကျနော် ရွာက ငယ်ကျွမ်းဆွေ မိစု ကိုတောင်သတိရ တမ်းတမိတယ်ဗျာ
အခုနေ ကျနော်လွမ်းလို့သေသွားရင် မနိုတရားခံနော်
မနိုစိတ်ကူးကောင်းတယ် ။ ခရီးသွားရင်း မှတ်တမ်းလေးနဲ့ ။ သူကြီးပြောသလိုပဲ ပုံ ၂ က လူတယောက်ရဲ့ တကယ့်ဟန်လေးကို ဖမ်းမိလိုက်တယ်။ ဂွတ်ရှယ်။
လှလိုက်တာ မနိုရယ် ။ ကိုကိုကြောင် မလာခင် ကြိုပြောသွားပီခင်ဗျ ။
ကိုကိုကြောင် အိပ်နေလို့ ညီညီကြောင်အရင် လားသွားပါတယ်။
အစ်မကြီး … မ Novy ရေ .. ကျွန်တော် လဲ အဲလို featured Photo တွေ ပဲ ရိုက်ချင် နေမိတယ်ဗျာ … အားပေးပါတယ် ဗျို့  … emotion ကို ဖမ်းရတာ လဲ .. ရင်ခုန် စရာ ပဲနော့ …
ဟုတ်တယ် ပုံ ၂လေူက ချစ်စရာ။
သူကလေးက သနပ်ခါး ပုတီးလုပ်ရောင်းတာလား။
EOS တစ်လုံး နဲ့ တဲ့ .. တီတီ padonmar ရေ .. သတင်း ရထားတယ် နော် … :-)
မနေ့ညက တောင် မန့်ဦးမလို့..
ပုံတွေမှာ …ဘိုခေဲး တွေထွက်နေတာ ကြည့်ရင်း ..
အက်ဖ်စတော့ပ် ၄လောက် အောက်ထစ် ရှိမယ် တွေးမိလို့…
လုပ်ပါဗျို့…. ရှယ်လိုဒက်အော့ဖ်ဖီးလ် လေးတွေ လွှတ် နှစ်သက်ပါကြောင်း..
စကားအတင်းစပ်… ကီးဘုတ်တော့ ရိုက်မပြစေလိုပါကြောင်း…
တီတီ padonmar လဲ EOS နဲ့ ပဲ ကိုယ့် ဆြာ ရေ။ အစ်မကြီး မNovy ပုံတွေကြည့်ရတာတော့ . DSLR နဲ့ ရိုက်ထားတယ် လို့ကို ထင်တာဗျ ..
ညမှောင် မည်းနက်၊ အိပ်ရေးပျက်လို့
မိဖြဲ မာမီ ကတော့ မိဖြဲ အပြင်ထွက် ရင် သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြား ကွက်ပြီးမှ ထွက် ခိုင်းတယ် ဆိုသလားပဲ။ ပါးကွက်ကလေး ပဲ ကွက်ပျက် ပြီး အိမ်ပြန်လာရင် …. အသိပဲ ဆိုလို့ … မိဖြဲ တို့ဘယ်သွားသွား .. သနပ်ခါး ဗူး အမြဲ ဆောင်နေရကြောင်း …..
သနပ်ခါးပြိုင်ပွဲတွေ ရှိရင် အမြဲလိမ်းတဲ့သူတွေကအနိုင်ရမှာကျိန်းသေတယ်နော် သူတို့တွေကအမြဲလိမ်းတော့လှနေမယ်နော် ကောင်းပါတယ်ပုံလေးတွေမှာ တကယ့်သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့သူတွေ ကိုရိုက်ထားတော့ကောင်းပါတယ်
လှပါ၏ လှပါ၏ လှပါ၏ ဒါမိုးတွေ မမြင်ရတာကြာပေါ့
ကွင်းနတ်ရှင် မကောင်းလို့ ဒီနေမှ တက်လို့ရပါတယ်
အခုလို အားပေးတဲ့ အတွက် ရွာသူားတွေကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကင်မရာ အစုတ်လေးကတော့ မနိုရဲ့ အသဲလေးဖြစ်ပြီ
ကင်မရာ အကောင်းစားပြောင်းကြီးကတော့ မနိုရဲ့ ဆရာရဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါကြောင်း
ဦးကြောင်ကြီးက တုံးဆိုတိုက် ကျားဆိုကိုက် မှန်ဒယ်ထင်ရင် နောက်မဆုတ်တဲ့သူကိုမှ ချစ်တာ…. အဲလိုကြေငြာရဲသူလေးနဲ့များ တွေ့လိုက်ချင်စမ်းပါရဲ့…။ နိုလေးလည်း တွေ့ရင် ပြောပါနော်.. ဦးကြောင်အသဲနှလုံးကျောက်ကပ်အဆုပ်အူနံရိုးအသွေးအသားအကြော အိုရှုပ်ပါတယ် တကိုယ်လုံးပုံအပ်ပါ့မယ်….။
ကကြောင်ကြီး တွေ့သမျှ ခင်ဗျားကြိးချည့်ပဲ မလွန်းလွန်းဘူးလား ဟွန်းးးးးး